HDPE ယက်ထည်လိပ် ဆိုတာဘာလဲ။ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံး HDPE ယက်ထည်လိပ် မှအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေရန်
HDPE ယက်ထည်များသည်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသည့်ပြန်လည်အသုံးချနိုင်သောပစ္စည်းဖြစ်ပြီးထုပ်ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်နေနှင့်ရေတို့ကိုကာကွယ်ရန်အတွက်သင့်လျော်သည်ကိုသင်သိပါသလား။
Summer Show Plastic Corporation ထုတ်လုပ်သည် HDPE ယက်ထည်လိပ်Changhua ရှိကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံများတွင်လစဉ် PP နှင့် PE ထုတ်ကုန်တန်ချိန် ၆၅၀ မက်ထရစ်တန်အကြားရှိသည်။ Taiwan။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်အထိဒေသခံပစ္စည်းများအတွက်ဤပစ္စည်းများကိုပုံမှန်ပေးသွင်းသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုဖောက်သည်တစ် ဦး စီ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းများပြုလုပ်ထားသည်။
သင့်တွင်ထုပ်ပိုးရန် (သို့) အမိုးအကာရှိသည့်ပစ္စည်းများနှင့်အမျိုးအစားပေါ်ရှိပညာရှင်တစ် ဦး ထံမှအကူအညီလိုအပ်ပါက
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး နှင့်စကားပြောပါ၊ သင့်ကိုနားထောင်ပြီးသည်နှင့်အကြံပြုချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ အခု!
ပုံစံ - DE-SERIES-01
စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်သိုလှောင်အိတ်များသို့မဟုတ်အခြားအစိုဓာတ်ကိုအထိခိုက်မခံမှုန့်သို့မဟုတ် granular ထုတ်ကုန်
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်သောစက်မှုအစွမ်းသတ္တိရှိသော PE ပလပ်စတစ်ယက်ထည်များကိုအထူးထုတ်လုပ်သည်.သင်၏စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်များအတွက် PE ပလပ်စတစ်ယက်ထည်လိပ်များထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်မိတ်ဖက်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ.ကျနော်တို့စုံစမ်းရေးနှင့်ရှင်းလင်းချက်ကြိုဆိုပါတယ်နှင့်လိုအပ်သောအဖြစ်ထုတ်ကုန်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.wovensack.com.tw/my/hdpe-woven-fabric-roll.html
အကောင်းဆုံး HDPE ယက်ထည်လိပ် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် HDPE ယက်ထည်လိပ် မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ
Laminated ယက်ထည် Roll